WordPress ကို Maintenance Checklist စာရင်း - အကြံပြုချက်များ၊ ကိရိယာများနှင့်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များစာရင်း Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 20, 2018 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2020 Douglas Karr
ဒီကနေ့ပဲငါဖောက်သည်နှစ်ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့ WordPress တပ်ဆင်မှုများအကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့်ပတ်သက်။ တော်တော်လေးရောင်းချသူ - မသိဘူး WordPress ၏လူကြိုက်များမှုကတကယ့်ကိုတကယ့်ပါတီများအများစုနှင့်ပေါင်းစပ်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်အခင်းအကျင်းများနှင့်ပလပ်ဂင်ဂေဟစနစ်သည်သင်ရနိုင်သမျှကောင်းသည်။ ငါအတော်လေးအနည်းငယ်တီထွင်ပါတယ် WordPress ကို plugins ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဖောက်သည်များနှင့်ဂေဟစနစ်ကိုထောက်ပံ့ရန်
သူကပြောပါတယ်, သို့သော်၎င်း၏ပြwithoutနာများမရှိဘဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလူကြိုက်များတာပဲ အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်WordPress သည်နေရာတိုင်းတွင်ဟက်ကာများနှင့်စပမ်းများအဓိကပစ်မှတ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းကြောင့် ၀ က်ဆိုဒ်များကိုရပ်တန့်သွားစေသည့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အသုံး ၀ င်မှုနှင့်ရှာဖွေမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ဆိုသောကြောင့်၎င်းသည်ဆိုဒ်များစွာအတွက်အကျိုးမရှိပါ။
WordPress ကိုစီမံခန့်ခွဲသူများကိုကူညီရန်ပြည့်စုံသော infographics ကိုတီထွင်ခဲ့သော BigrockCoupon ကဲ့သို့သောလူများရှိခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သူတို့ရဲ့အချက်အလက်များ၊ WordPress ဝဘ်ဆိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစာရင်း၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့်ပြissuesနာများကိုကာကွယ်ရန်သူတို့၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုအချိန်ဇယားဆွဲရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအကြံဥာဏ်များနှင့်အလေ့အကျင့် ၅၀ ကျော်ရှိသည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏ WordPress ကို Maintenance စာရင်းပါ
ဒီအချက်အလက်စုဆောင်းမှုမှာအချက်အလက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်ဖုံးကွယ်ထားလျှင်သင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်များစွာသာလွန်သည်။ ငါသည်လည်း၏စာရင်းကိုထိန်းသိမ်းရန် အကောင်းဆုံး WordPress ကို plugins ကို ကျနော်တို့စမ်းသပ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ... မှတ်သားဖို့သေချာပါစေ!
သင်၏ WordPress ဒေတာဘေ့စ်ကိုအရန်ကူးပါ - WordPress နှင့်သင်ဘာမှလုပ်မလုပ်မီ၊ သင့်အားအဝေးထိန်းထားသည့်အရန်များများသေချာအောင်ထားပါ။ ထို့ကြောင့် WordPress Managed Hosting ကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးပါသည် Flywheel။ ၎င်းတို့သည်အလိုအလျောက်နှင့်တစ်ကြိမ်နှိပ်ရုံဖြင့်အလိုအလျောက်မိတ္တူကူးခြင်းများရှိသည်။ မည်သည့်အရာမှပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊
WordPress ကိုဆေးစစ်ပါ - ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတဆင့်ဖွင့်ပါ WP စစ်ဆေးမှု သင်၏ site နှင့်အတူသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အရာများစွာရှိသည်။ ပြissueနာတိုင်းကသင့်ကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းတိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်မြန်နှုန်းစစ်ဆေးခြင်း - အသုံးချ Google's PageSpeed ​​Insights မြန်နှုန်းကိစ္စများအတွက်စာမျက်နှာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်။
Broken Links များကိုစစ်ဆေးပါ။ အွန်လိုင်းကိရိယာအမြောက်အမြားကိုသုံးပြီးနောက်မှကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာထက်မဆိုပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့ပြီမဟုတ်ပါ အော်ဟစ်ဖား SEO ဆိုသည်မှာပင့်ကူ ကျိုးနေသောလင့်များအတွက်ဆိုဒ်များတွားဘို့။ infographic အနေဖြင့်ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန် plugin တစ်ခုထည့်ရန်အကြံပြုပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျဆင်းစေပြီးသင်၏အိမ်ရှင်နှင့်ပြtroubleနာအနည်းငယ်ကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
301 Broken Links အတွက် redirect - နှင့်အတူတည်ခင်းourည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအပြင်ဘက် WPEngine၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ညွှန်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားလုံးသည်လည်ပတ်ကြသည် ပြန်ညွှန်းပလပ်အင်.
WordPress၊ Themes နှင့် Plugins များကိုနောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်ပါ - လုံခြုံရေးပြissuesနာများကြောင့်ယနေ့အချိန်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် သင်ကပလပ်အင်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုစိုးရိမ်သောသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သင်၏ site ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်၊ သင်ပလပ်အင်အသစ်တစ်ခုကိုရှာချင်လိမ့်မည်။ developer အားလုံးသည်လာမည့် WordPress ထုတ်ဝေမှုများတွင်သူတို့၏ themes များနှင့် plugins များကိုစမ်းသပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
Spam ထင်မြင်ချက်များကိုဖျက်ပါ။ ငါရဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ် Jetpack နှင့်ဤကူညီရန် Akismet မှစာရင်းသွင်း။
အသုံးမပြုရသေးသောအကြောင်းအရာများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်တက်ကြွသော၊ အသုံးမပြုသောပလပ်ဂင်များကိုဖျက်ပါ။ activated plugins များသည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အခါသင့် site သို့ code ပေါင်းထည့်သည်။ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်မှုကမပါဘဲလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဗားရှင်းများနှင့်အမှိုက်ပုံးရှင်းလင်းရန် - သင်၏ဒေတာဘေ့စ်ငယ်လေလေအကြောင်းအရာများကိုဆွဲဆောင်ရန်မေးမြန်းချက်များမြန်လေဖြစ်သည်။ ပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာများနဲ့တင်ပို့ချက်များအပြင်ပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာများနဲ့တင်ပို့ချက်များကိုပုံမှန်ဖယ်ရှားပါ။
ဝဘ်ဆိုက်လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း - Flywheel ငါတို့ကလုံခြုံရေးပလပ်ဂင်တွေမဟုတ်ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့အိမ်ရှင်နဲ့သွားဖို့အကြံပေးချင်တယ်။ သူတို့၏အဖွဲ့သည်ပလပ်အင်တစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ယံမပါဘဲလုံခြုံရေးထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။
Database ဇယားများကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ - သငျသညျမြားစှာသော themes များနှင့် plugins ကို install လုပ်ထားလျှင်, သူတို့အများစုဟာဒေတာတွေကိုသင့်ရဲ့ဒေတာဘေ့စ၌ထားခဲ့ပါ။ အသုံးမပြုသည့်ဒေတာများကိုမြင်နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြည့်သည်ဖြစ်စေမေးမြန်းခြင်းနှင့်တင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုပိုမိုတိုးပွားစေပြီးဝန်ကြာချိန်ကိုတိုးစေသည်။ စာရင်းပြုစုထားသောပလပ်အင်သည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းသည်၊ ကျွန်ုပ်အကြံပြုချင်ပါတယ် အဆင့်မြင့် Database Cleaner.
ပုံရိပ်များ Optimization - ပုံမချသောပုံများသည်သင့် site ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကြီးအကျယ်သက်ရောက်နိုင်သည်။ ငါတို့ချစ်တယ် ရိုက်သံ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံများကို compress လုပ်ရန်အတွက်၎င်း၏ WordPress plugin ။
Email Opt-in နှင့်ဆက်သွယ်ရန် Forms များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစစ်ဆေးပါ။ ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား Form များ တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များထံမှသူတို့၏အသစ်တင်ထားသော site တွင်ပုံစံများရှိသော်လည်းတိုင်ကြားချက်မရရှိခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့အားတိုင်ကြားချက်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးကြည့်ပါကပုံစံများသည်အတုအယောင်ပုံစံများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်မိသူမည်သူမဆိုတင်ပြခဲ့သည်၊ သို့သော်ဒေတာသည်မည်သည့်နေရာတွင်မျှမသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နာကျင်! သုံးစွဲသူတိုင်းနှင့်အသုံးပြုသည်။
Google Analytics ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကမည်သည့်စာမျက်နှာများကိုအမှန်တကယ်ရည်ညွှန်းသည်သို့မဟုတ် visitors ည့်သည်များဖတ်ရှုသည်ကိုပင်အမြဲတမ်းအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်တန်ဖိုးထားတယ် အသုံးပြုသူစီးဆင်းမှုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှလူများမည်သို့သွားလာနေသည်ကိုပြသသည့်အစီရင်ခံစာ။
Google Search Console ကိုစစ်ဆေးပါ - Analytics သည်သင်၏ site ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိလာသူကိုသာပြသည်။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြင့်ကြည့်ရှုသူများကော။ ကောင်းပြီ၊ ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူသည်သင်၏ site ကိုကျန်းမာရေး၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ရှာဖွေမှုရလဒ်များအတွက် Google ကမည်သို့ရှုမြင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်ကိရိယာဖြစ်သည်။ အမှားအယွင်းများအချက်အလက်များအားစောင့်ကြည့်ပြီး၎င်းတို့ပေါ်လာသည့်အခါ၎င်းတို့ကိုပြင်ဆင်ရန်ကြိုးစားပါ။
သင့်အကြောင်းအရာကိုအသစ်ပြောင်းပါ - ဤစာမူကိုရေးသားစဉ်က၎င်းတို့အားနောက်ဆုံးအခြေအနေအဖြစ်သေချာစေရန်ငါကိုးကားထားသောတင်ပို့ချက်အနည်းဆုံးတစ်ဒါဇင်ဝက်ခန့်ကိုကျွန်ုပ်တင်ပြခဲ့သည်။ သင်၏ဆိုက်ပေါ်ပေါက်လာသောပြissuesနာများ - မတည်ရှိတော့သည့်ပြင်ပဆိုဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ပြproblemsနာများရှိသည့်ပုံများနှင့်ခေတ်နောက်ကျသောအကြောင်းအရာများ - ကဲ့သို့သင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလတ်ဆတ်စွာထားပါ၊ ဒါကြောင့်သူကမျှဝေပြီး၊
ပြန်လည်သုံးသပ်ခေါင်းစဉ် & Meta ဖော်ပြချက် tags များ - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်သင့်ဆိုဒ်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာပလပ်ဂင်များကိုတပ်ဆင်ပြီးပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်များသည်သင်၏စာမျက်နှာကို၎င်းဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာအတွက်မှန်ကန်စွာရည်ညွှန်းနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ meta ဖော်ပြချက်များသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများကိုသင်၏စာရင်းရလဒ်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒီနေရာမှာအချက်အလက်များ ၅၀ ကျော်နှင့်ပြည့်စုံသောအချက်အလက်အပြည့်အစုံပါ BigrockCoupon!
Tags: Broken လင့်ခ်များအတွက် 301 redirectသင်၏ WordPress ဒေတာဘေ့စ်ကိုအရန်ကူးပါသင်၏စကားဝှက်ကိုပြောင်းပါသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ Adsense ကြော်ငြာကိုစစ်ဆေးပါAffiliate Links များကိုစစ်ဆေးပါEmail Opt-in နှင့် Contact Forms ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစစ်ဆေးပါBroken Links များကိုစစ်ဆေးပါGoogle Console (ဝက်ဘ်မာစတာ) ကိရိယာများကိုစစ်ဆေးပါအသုံးပြုတဲ့အရင်းအမြစ်များကိုစစ်ဆေးပါSidebar Links များနှင့် Blogrolls များကိုစစ်ဆေးပါSocial Media Links များကိုစစ်ဆေးပါWeb Host စာရင်းအင်းများကိုစစ်ဆေးပါဝဘ်ဆိုက်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးပါသင်၏ Download Links ကိုစစ်ဆေးပါသင့်ဆိုဒ်၏ Feeds များကိုစစ်ဆေးပါသင့်ဆိုက်၏သွားလာမှုကိုစစ်ဆေးပါအမှိုက်ပုံးရှင်းAuto Save Interval ကိုသတ်မှတ်ပါSpam မှတ်ချက်များကိုဖျက်ပါမလိုအပ်သောပလပ်ဂင်များကိုဖျက်ပါမလိုချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်များကိုဖျက်ပါအလိုအလျှောက် WordPress Updates များကိုပိတ်ပါDebug Mode ကိုပိတ်ပါTrackbacks နှင့် Pingbacks ကိုပိတ်ပါပုံများ OptimizationMemory Limit တိုးမြှင့်ပါmalware ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမီဒီယာဖိုင်များရှင်းလင်းပါDatabase ဇယားများကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပါပို့စ်တင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုHeader Banner နှင့် Site Images ကို Refresh လုပ်ပါမူကြမ်း & Post တည်းဖြတ်မူများကိုဖယ်ရှားပါမလှုပ်မရှားဝက်ဘ်ဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုဖယ်ရှားပါHosting & Domains အသစ်ပြုလုပ်ပါမှတ်ချက်များကိုပြန်ကြားခြင်းGoogle Analytics ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါMeta ခေါင်းစဉ်နှင့် Meta ဖော်ပြချက်အညွှန်းများကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါOn-Page-SEO ဆိုသည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါသင့်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စာမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်ပါWP Checkup မှတဆင့်ဆိုက်ကို runနေ့စဉ် Backups ယူပါBrowser & Device Compatibility ကိုစမ်းသပ်ပါသင်၏အောက်ခြေရှိမူပိုင်ခွင့်ရက်စွဲကိုအသစ်ပြောင်းပါသင့်အကြောင်းအရာကိုအသစ်ပြောင်းပါသင်၏ WordPress Plugins ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါသင်၏ WordPress အခင်းအကျင်းကိုမွမ်းမံပါသင်၏ WordPress ဝစ်ဂျက်များမွမ်းမံပါWordPress ကိုနောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်ပါသင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုအတည်ပြုခြင်းဝဘ်ဆိုက်လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မြန်နှုန်းစစ်ဆေးခြင်းwp စစ်ဆေးသည်